Pejy an-tsary : Atrikasa momba ny fanafainganana ireo raharaham-pitsarana misy famonjana momba ny ady heloka tsotra sy ny ady heloka bevava
Fanafainganana ny raharaham-pitsarana :
Tratrarina anatin’ny 3 volana ny taha 70/30
Tarigetra mazava ny fanafainganana ny raharaham-pitsarana. Fanamby apetraka noho izany ny hanatrarana anatin’ny 3 volana ho avy izao, ny taha (ratio) 70/30 any am-ponja, izany hoe 70% no voafonja efa voatsara, ary 30% kosa ny tahan’ireo miandry fitsarana. Notontosaina androany Alatsinainy 20 Septambra 2021 teto amin’ny tranom-bokin’ny Ministeran’ny Fitsarana eto Faravohitra, ny atrikasa momba ny fanafainganana ireo raharaham-pitsarana misy famonjana, momba ny ady heloka tsotra sy ady heloka bevava. Nandray anjara tamin’izany ireo lehiben’ny rafim-pitsarana isan’ambaratongany, ireo lehiben’ny mpiraki-draharaha isan-tsokajiny, ary ny avy amin’ny fandraharahana ny fonja. Paikady mivaingana sy azo tanterahina anaty fotoana fohy ezaka no navoaka.
Hisy ny fanaraha-maso manokana amin’ny fanatrarana ny tanjona, ary hitsarana ireo tompon’andraikitra isan-tsokajiny izany. Hafainganina tahaka izay ihany koa ny fitsarana ireo raharaha mahakasika tsy ampy taona voafonja.
Pejy an-tsary androany alatsinainy 20 Septambra 2021 : Fananganan-tsaina teto Faravohitra
Hentitra ny Minisitra IMBIKI Herilaza
Misy foana ny zavatra tokony ho vita isan’andro. Isan-kerinandro dia misy ny tatitra mila alefa avy amin’ny sampan-draharaha rehetra manerana an’i Madagasikara, ka isaky ny zoma amin’ny 12 ora no fara-fandraisana izany. Misy ny tanjona apetraka isan-kerinandro, misy ny mari-drefy hanarahana ny fahatontosan’ireo. Jerena inona no vita, inona no tohizana, ary inona no mila hatsaraina.
Nivoitra ireo androany Alatsinainy 20 Septambra 2021, nandritra ny lahateny nataon’ny Mpitahiry ny Fitombokasem-panjakana, Minisitry ny Fitsarana Atoa IMBIKI Herilaza, taorian’ny fananganan-tsaina teto Faravohitra. Hentitra ny fampahatsiahivana sy fanentanana nataony ho an’ny mpiasa rehetra tsy an-kanavaka, amin’ny fanajana ny fitsipi-pifehezana anaty fanatanterahana ny asa.